SMS jadwaliye waa qalab si toos ah oo soo diro fariimaha qoraalka ah ee aad ku qoray muddo waqti go'an oo la soo noqnoqoshada qaar ka dib. Waxay kaa caawinaysaa in la xasuusnaado taariikhaha muhiimka ah iyo in aad reebay halmaamay dhalashada, ama dabbaaldegyada kuwa aad u dhow oo u jeclahay. Just qor fariin iyo badbaadin. Fur ah app jadwalka SMS iyo u dhigay, taariikhda iyo waqtiga markii aad rabto in aad u soo dirto fariin ah. Iyadoo aan lahayn walaac dheeraad ah waxaad ka, app ku soo diri doono fariinta aad badbaadiyey ee taariikhda saxda ah iyo waqtiga sida dhigay.
Waa kuwan qaar ka mid ah barnaamijyadooda jadwalka SMS ugu trending inuu kaa caawiyo inaad la qorsheeyey fariimaha qoraalka ah, laga heli karaa qalabka macruufka iyo Android.
1. SMS jadwaliye
2. Jadwalka SMS, mar dambe soo dir
4. Advance SMS jadwaliye
5. SMS jadwaliye (Text Later)
7. Smart SMS maaweelin
Waqtiga 9. SMS
Sida magacaba ka muuqata, app jadwaliye SMS ah kuu ogolaanaysaa inaad jadwal fariimaha qoraalka ah qalabka Android aad. Waxaad fursad u haysataa inaad doorato inta jeer ee diro fariimo, laga bilaabo shan daqiiqo kasta in ay saacad kasta. App wuxuu ka kooban yahay qaababka kale fariimaha aasaasiga ah iyo sidoo kale, dadka qaata SMS kuwaas kala duwan, xulashada qaata ka xiriirada, iyo wixii la mid ah.
Tani waa app kaamil ah si aad u qorsheysato fariimaha aruuray badan aan, iyo nasiib wanaag, waxaa laga heli karaa dukaanka Play Google oo lacag la'aan ah.
OS taageerayaan: Android
Free ah kharashka.
Aad saxda ah ee ku saabsan taariikhaha iyo waqti.
Xiriir ee erayada hore wax yar uun u muuqdaan in sanduuqa qaataha.
Jadwalka SMS, mar dambe soo dir
Iyada oo awoodda caawinaya in aad u soo diraya fariimaha deg dega ah waqtiga la eego, codsiga sameeya shaqo ku haboon ee dalbaa fariimahu aad u. Waxay leedahay interface ka jecel yahay, oo disorder xor ka ah meesha aad la fariimaha aad jaale ka qaban karin. Mid kasta oo ka mid ah fariimaha in kuu soo diri isticmaalka codsigan ayaa la badbaadiyey oo qayb ka ah codsigaaga stock SMS, sidaas darteed ma jiro sabab ku kalifay in ay ku adkaysato in ka badan halkaas oo in la ogaado fariimaha aad.
Interface user aad u qurux badan.
Aad u gaar ah oo ku saabsan taariikhda iyo waqtiga.
App badbaadinayo Daashboodh oo loo qorsheeyey in app stock SMS ah; Halkan ka waxaa laga yaabaa in la tirtiro si qalad ah.
App Tani ma taageeri luqado kala duwan.
Text Later weli waa app kale oo kuu ogolaanaya in aad u soo dirto qoraalka aad wakhti dambe iyo taariikhda. Oo wax alla wixii aad ku samaysaan app la oggollaan inaad xaq u leedahay in aad app stock SMS. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad weligaa si aad u hesho farriin ah in aad soo diray isticmaalaya app this, waxa ay noqon doontaa heli karo app Fariin stock. Screen ugu weyn ee app waxay bixisaa si aad u qorsheysato SMS cusub ama arkaan kuwa aad horay loo qorsheeyey. Tubada ee mid kasta oo raac tilmaamaha iyo aad waa wanaagsan si ay u tagaan noqon.
Fursado kale oo kala duwan marka laga reebo jadwalka SMS.
In app this sidoo kale, Daashboodh oo ku badbaadiyey ee app stock SMS ah; oo halkan ka heli kartaa tirtirayaa.
Waxa aanu badbaadiyo Daashboodh diray si mustaqbalka loo adeegsado.
Advance SMS jadwaliye
The jadwaliye Advanced SMS balanqaadayo oo waa inuusan marna ku siin doonaa fursad uu ku dayacaad in baaq loo diro shaqsiyaadka saxda ah waqtiga saxda ah. On fursad off in munaasabad heer sare ah waxaa ka dhaca hareerahaaga ku wareegsan, tani waa codsiga waa in aad ku rakiban aad qalab si dhakhso ah. Codsiga waxaa ay muujineysaa Layouts kala duwan ee fariimaha aad, sidaas qaata aad ha u caajisin arkaya design Warkii isla fariin kasta oo ay heli ay qalab.
• interface user aad u fiican.
• Foomamka iyo qaabab kala duwan si ay u soo dirto fariin.
• Maqaallo alarm gaar ah oo dhan taariikhaha muhiim badbaadiyey in jadwalka.
• Maadaama oo waxa jira arrimo kala duwan iyo qaabab u diraya SMS hal, waxaa mararka qaarkood dhici karta in khaldaan diraha ama qaataha.
• Xitaa ka dib markii ay Daashboodh oo loo qorsheeyey, oo waxay ku hadheen database iyo sidaa darteed, hoos xawaare nidaaminta.
• Ma taageeri luqado kala duwan ah ee qoraalka.
SMS jadwaliye (Text Later)
Jadwaliye SMS The (Text Later) app ayaa feature aad u khaas ah; taas oo ah taageero loogu luqado kala duwan. Sidaas Ingiriisi uusan lahayn inuu ahaado qoyskaaga afka hooyo si ay u awoodaan in aan fariin u dirno; hadda waxaad isticmaali kartaa luqadda aad ku hadasho in baaq loo diro aad. The feature labaad ee ugu muhiimsan ee app waa waxa aad ogolaanaysaa gurmad iyo soo celin loo qorsheeyey in baaq card SD aad. Haddii aad inta badan ku beddelato casriga ah, app this waxay fududeyn doontaa in aad dib u helaan qorsheeyey fariimaha aad.
• app waxa uu leeyahay taageero ah luqado kala duwan.
• Waxaa badbaadiyay oo dhan Daashboodh diray in kaarka SD ugu mustaqbalka.
• Tan waxaa ka badbaadiyay oo dhan Daashboodh diray in kaarka SD ah, taasina waa sababta ay u abuuri badan oo xasuusta khasnado iyo xogta kaydin doono oo wuxuu dhammayn badan oo dhan meel.
AutoText waa app ee jadwalka SMS kama dambaysta ah ee qalabka macruufka. Waxaad sameysan kartaa fariimaha qoraalka ah u soo dirto markii aad rabto, cidda aad doonayso. Dhig oo illooba app this dirtaa fariin aad telefoon ama xitaa dalka ka maqan yahay! Waxad abuuri kartaa kooxaha in aad si joogto ah u balan fariimaha in, xataa diri xusuusinta text naftaada oo kaliya marka aad u baahan tahay.
Taageerayaan OS: macruufka iyo Android
Iyadoo AutoText, waxaad si deg deg ah abuuri kara iyo jadwal Daashboodh oo aad koox adiga kuu gaar ah.
Tick ​​A kaliya oo asal ahaan composes update aad u baahan tahay iyo jadwalka taariikhda aad u baahan tahay.
Ma taageeri luqado kala duwan.
Aad u qaali ah.
Saacad SMS Smart
The app saacad SMS si fiican u la shaqeysaa iPhone kuu ogolaanaya in aad jadwal SMS oo idin xusuusin doonaa ku saabsan waqtiga markii aad ogolaatay in la diro SMS in.
OS taageerayaan: macruufka
Jadwaliye Tani SMS diri kartaa SMS ah "Iyada oo Quraan" sidaas ogeysiin ah oo loo soo diray inay iPhone oo ku saabsan taariikhda jadwalka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa SMS jadwaliye ama burin fariinta.
No lug xisbiga saddexaad.
Waxaa laga yaabaa inaad u soo jiidi jadwalka of riwaayad, ama nooc kasta oo kale oo ka mid ah qaab ama barnaamijka; iSchedule u fududaynaysa inuu idin dhiso nooc kasta oo jadwal, tan iyo markii aad si fudud ku dari kartaa ama wax ka dhimo saacadood, daqiiqo iyo ilbiriqsi. Ugu dambayntii waxaad badbaadin kartaa jadwalka sida text-files si mustaqbalka loo adeegsado.
iSchedule auto diri kartaa fariimaha xilliga hadda la joogo oo la wareegay karaa maalmo, bilo, iyo xataa sano ka dib.
Taageerada group diraya.
Aad sax ah oo ka kaaftoomi lacag la'aan ah.
App ee la bixinayo iyo halkan ay dadka qaar ka waaban tan iyo markii ay ka heli karaan barnaamijyadooda jadwalka isku mid lacag la'aan ah.
Waqtiga SMS waa aalad awood farriimaha iyo mails diraya. Marka ayaa qorsheyneysa in aad u soo dirto fariin ah in ay qof wakhti dambe, oo kaliya waqtiga SMS furan, xulo isaga / iyada lambarka taleefanka, balan waqtiga, iyo qor waxa aad rabto inaad tiraahdo. Markaas waqtiga SMS idin xusuusin doonaa waqtiga loo qorsheeyey, oo dhan aad u baahan tahay in la sameeyo waxa la riixaayo galuuska Send ah.
Waxaad dooran kartaa in baaq loo diro iyo mails waqti qorsheeyey ama si degdeg ah ka dib markii tafatirka.
Waxaad sameysan kartaa fariimo badan oo mails in loo diro waqti oo kala duwan si gooni gooni ah.
Xiriirada kala tagi karaan dhamaan caadooyinka luqadda ee macruufka.
Ku celi diraya fariin ama mail.
Si aad ku dari text in arrimo aad, iyo xigto kuwa marka sixiddiisa fariin / mail.
Kaabta iyo soo celinta ama ka iCloud.
Xitaa ka dib markii lagu badbaadinayo SMS ah oo jadwal u soo diraan, waxaa lagu siin doonaa ogeysiis ah in aan fariin u dirno markii wakhtigii loogu talagalay yimaado. Sidaa awgeed, waxaa suurto gal ah in aadan xusuusan oo SMS aadayo unsent.
Qorshooyinka waa app ah nifty yar ma aha oo kaliya la shaqeeya fariimaha SMS, laakiin sidoo kale la Facebook, Twitter, iyo fariimaha Gmail. Sure, waxaa jira dad kale barnaamijyadooda interface in adeegyada kala duwan oo ay leeyihiin sifooyinka badan oo kaliya fariin jadwalka, laakiin tani waa dhan-in-ka mid ah xal u weyn marka tallaabada kaliya ee aad u baahan tahay waa feature jadwaliye ah.
Qorshooyinka ku wargelin doono markii Android qorsheeyey fariimo soo diray oo aad joojin kartaa jiraan farriimo la sugayo safka.
Qorshooyinka interface waxaa loogu talagalay mabaadiida Holo maanka, taas oo macnaheedu yahay waa nadiif ah oo toos ah.
Waxay abuurtaa badan oo data khasnado, taas oo iyana gubtay badan oo boos.
> Resource > Top List > Top 10 SMS jadwaliye inuu kaa caawiyo inaad fariin qoraal ah Later dir